3 dagaalyahaniinta al-Shabaab ah oo u soo fakatay ciidanka Soomaaliya - Sabahionline.com
3 dagaalyahaniinta al-Shabaab ah oo u soo fakatay ciidanka Soomaaliya Abriil 26, 2012
Saddex dagaalyahan oo al-Shabaab ah oo joogey Jubbada Hoose ayaa dhinaca kale u soo waregay, waxaana soo dhaweeyey saraakiisha dawladda hoose, Idaacadda Bar-Kulan ee ay Qaramada Midoobay maalgeliso ayaa Khamiistii (26-ka April) werisay. Qodobbo la xiriira
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo al-Shabaab kula dagaallamay Yurkud
Weerarrada lagu hayo al-Shabaab oo la sii dardar-galinayo kadib qabsashadii Afgooye
Lumintii Afgoye ayaa Al-Shabaab ku ah Dharbaaxo Culus
Saddexda dagaalyahan oo iska soo dhiibay Qooqaanni ayaa markoodii hore ka amar qaadan jirey Xasan Yacquub. Labo ayaa ka mid ahaa ilaalada u gaarka ah meesha uu kan saddexaadna ahaa wadihisii gaariga, Maxamed Cabdullaahi oo ah sarkaal ka tirsan milliteriga Dawladda FKMG ah ayaa sidaa u sheegay Bar-Kulan. Raggaa soo baxsaday ayaa si diirran loo soo dhaweeyey waxaana haatan lagu hayaa saldhigga bilayska ee degmada, ayuu yiri. Soo baxsiga dagaalyahaniintan ayaa wuxuu imanayaa hal toddobaad ka dib markii ay labo kale oo hoggaamiyeyaasha al-Shabaab ka mid ah isu soo dhiibeen saraakiisha ku sugan Qooqaanni, Bar-Kulan ayaa werisay. Dawladda ayaa soo baxsiyadatan u tiirinaysa cafiska joogtada ah ee ay u fidisay xubin kasta oo al-Shabaab ah oo soo baxsata. Muxuu kula yahay qoraalkan?